Seylada Online ka ee Tog-wajaale.....Waa Seylad furan 24 Saacadood
SAYLADDA ONLINE KA EE TOG-WAJAALE
Waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadka afka Somaliga ku hadlla meel ay joogaanbba, in loo furay Saylad Online ah oo magaceeda la yidhaa TOG-WAJAALE, oo aad alaabada iyo wax walb ba oo aad iibinayso , aa d ku soo ban dhigi karto , kuna iibin karto.
Waa Shirkaddii ugu horeysay ee hir galisa Seylad Online ah ,oo u fur an dhammaan umadda af Somaliga ku hadasha , qof walabana isagoo jooga meheradiisa,xafiiskiisa ama gurigiisaba , uu ka dalban karo , lana xidhiidhi karo qofka wax iibinaya ama Meherada wax iibinaysa.
Seyladda Online ka ee Tog-Wajaale,waxay ugu bishaaraynaysa dham maan dadka af Somaliga ku hadla, ee Meheradaha ku haysta wadama dooda , Qurbaha ama Guryahoodaba wax ku iibiya,inay kuu hayso mac aamiil aad u tiro badan , oo caalamka meel walbba ku sugan ,ganacsig aagana aad ku horumarin karto.
Haddii aad xayaysiis tayo leh u baahan tahay,si aad u kobciso mehera daada,ha moogaan inaad ka dhex muuqato Seyladda wax kala iibsiga ee Tog-wajaale.
Waxaa nasiib u yeeshay,xadhigana aan kaga jaraynaa Seylada Online ka ee Tog-wajaale , Bustaan iib ah :
Haddii aad u baahan tahay inaad wax ku iibiso ama ku xayaysiisato m eheradaada Seylada Online ka ee Tog-wajaale , fadlan kala xidhiidh Emailkan: saylada@Gmail.com